I-Plex isivumela ukuba sisasaze umculo kwiziko lethu leendaba nge-Android Auto | Iindaba zeGajethi
Zombini i-Plex kunye neRhafu zezona ziphambili, kwaye singatsho kuphela ukhetho lomgangatho ukuba sifuna ukuseta iziko losasazo emakhayeni ethu kwaye ke sigcine iimovie, umculo, iifoto ... Nangona kuyinyani ukuba kukho ezinye iindlela onokuthi ukhethe kuzo imarike, akukho namnye kubo osinika ukhetho oluninzi njengePlex kunye neRhafu.
Ngelixa ixesha elithile ngoku, i-Kodi ibonakala ikwiliso loqhwithela ngobuqhetseba, I-Plex iyaqhubeka nendlela yayo ngesantya esihle kwaye yongeza imisebenzi emitsha nganye inomdla kunale yokugqibela. Umsebenzi wokugqibela owongeziweyo usivumela ukuba sidlale umculo ogcinwe kwiziko lethu losasazo ngokusasaza ngeAuto Auto.
Lo msebenzi ulungile ukuba sisebenzisa i-Plex ukusoloko sinelayibrari yomculo iphela kuba iinkonzo zokusasaza umculo aziyonto yethu, nokuba kungenxa yokuba umculo wethu ukhethekile okanye kungenxa yokuba siguqule ilayibrari yomculo ebanzi sinayo iMP3 CD soloko unayo. Ukusebenza kolu khetho kuyafana nokubonelelwa nguPandora okanye uSpotify ngaphandle kokuqhubeka, kodwa Umahluko wokuba umculo oza kudlalwa ufumaneka kwilayibrari yethu egcinwe kwiziko leendaba.
Kwakhona ivumela ukuba sidlale umculo esiwukhuphele ngaphambili kwisixhobo sethu, ukuba asifuni ukusebenzisa ireyithi yedatha yethu. Ndiyabulela kule nto intsha, sinokulawula ukudlalwa kweziko lethu leendaba ngokuthe ngqo kwi-multimedia interface yesithuthi sethu apho i-smartphone yethu iqhagamshelwe, nokuba kungoku nge-USB okanye ngaphandle kweengcingo.
Eli nqaku liza kuqala ukufika kwiintsuku ezimbalwa ezizayo njengohlaziyo. Ukuba awunasithuthi sinale teknoloji, ungaqhubeka nokudlala umculo wakho owuthandayo kwiziko lakho leendaba ngokusebenzisa i-smartphone yakho ngaphandle kwengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Plex isivumela ukuba sisasaze umculo kwiziko lethu lemithombo yeendaba nge-Android Auto